Afrika: Manamarika ny andro manerantany miompana amin’ny SIDA amin’ny alalan’ny tononkalo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2018 21:06 GMT
Tononkalo nosoratan'i Mike Kwambo, poeta mpikambana ao amin'ny vondrona tononkalo Mstari Wa Nne any Nairobi, Kenya ity ary bilaogera ara-panatanjahantena. Ny tononkalo dia nosoratana sy navoaka tao amin'ny pejin'ny facebook Mstari Wa Nne tamin'ny 1 desambra 2009 tamin'ny fanamarihana ny Andro manerantany miompana amin'ny SIDA, andro iray ankalazaina manerana izao tontolo izao miaraka amin'ny hafatra nohavaozina ahitana fanantenana ho an'ireo voan'ny SIDA sy ireo voakasik'izany.
“Ity tononkalo ity dia momba ny SIDA. Nanoratra ity tononkalo ity aho mba hahatonga ny olona hahatsapa fa tsy momba ny firaisana ara-nofo sy izany rehetra izany ny fiainana. Saingy manaiky fa maro ny olona maty noho ny VIH sy Sida ary maro ny ankizy navela irery mba hikarakara ny fianakaviany, ny zatovo ary ny rahalahiny. Ny VIH dia aretina ivelany tsy maintsy iarovantena. Milaza izy ireo fa ny fifadiana amin'ny firaisana ara-nofo no fomba tsara kokoa hanatsarana ny hoavin'ny taranaka tsy misy VIH. Ny lazaiko dia, aza avela handratra anao ny zavatra lazaina momba anao. Alaivo izany dia takaro tsara fotsiny ary avelao handeha. Ary aza avela hamaritra nynamarina ny zavatra niainanao tamin'ny ho avy ny niainanao. “
Ao amin'ny bilaogiko manokana Kenyan Poet, tononkalo iray manome ny dika feno vaovao ny SIDA, “Ny tsy firaharahian'i Afrika ny Fiarahamonina Miala Aina” na “Africa's Ignorance of A Dying Society” (AIDS)
Vakio eto ny ambin'ny tononkalo